हिमपात | पाउन्ड स्लटहरू
हिमपात नेक्स्टजेनबाट चिसो स्लट हुन सक्छ तर तपाईं आफैले जीतको आँधीबेहरी स्कूपिंग पाउनुहुनेछ। यस खेलले उत्कृष्ट ग्राफिक्स सुविधा प्रदान गर्दछ जुन एक स्थिर टुन्ड्राको बिरूद्ध सेट गरिएको हुन्छ। २ five paylines को साथ यो पाँच रल्स स्लट मुक्त spins गोल संग बोनस सुविधाहरूको एक जोडी संग आउँछ। खेलाडीहरूले यस खेलको मजा लिन सक्छन् पाउन्ड स्लटहरू.
NYX (NextGen) मा खेल्न उपलब्ध छ कि यो खेल को विकास गरीएको छ पाउन्ड क्यासिनो। नेक्स्टगेन गेमिaming founded ० को दशकको अन्तमा स्थापना भएको थियो र त्यसदेखि विश्वभरका ग्राहकहरूका लागि उत्कृष्ट गुणस्तर स्लट खेलहरू सिर्जना गर्दै आएको छ।
यो सुन्दर ढ designed्गले डिजाइन गरिएको खेल कम्तिमा p०p र अधिकतम spin०० प्रत्येक स्पिनको लागि खेल्न सकिन्छ। खेलको पाँच रीलहरू तारांकित रातको आकाशको पृष्ठभूमिमा सेट गरियो। यो खेल मा खेल्न सकिन्छ पाउन्ड क्यासिनो। दस अद्वितीय रूपले डिजाइन गरिएको निलो, बैजनी र हरियो स्नोफ्लेक्स पर्दामा उपस्थित प्रतीकहरू हुन्। तपाईं आठ-पोइन्ट हिउँको अधिक देख्न चाहानुहुन्छ जुन सब भन्दा बढी तिर्दछ। तपाईले to देखि coins०० सिक्का देखि २ सम्म combination संयोजनमा अवतरणको लागि प्राप्त गर्नुहुनेछ। जंगली पनि खेल को स्थिर विषय राख्छ र बरफ को एक ब्लक मा sculpted छ। तपाईले pay०० सिक्का प्राप्त गर्नुहुन्छ एक payline मा पाँच प्राप्त गर्न को लागी यसले स्क्याटर बाहेक अरू सबै प्रतिस्थापन गर्दछ। तपाईं यस खेल खेल्न सक्नुहुन्छ पाउन्ड क्यासिनो.
बर्फी वाइल्ड- यो सुविधा कुनै पनि स्पिनमा ट्रिगर गर्न सकिन्छ र प्रत्येक रिलमा एउटा थप्दै पाँच वाइल्ड सम्म थपिनेछ। जंगली टाँसिएर रहँदा तपाईंले नयाँ भुक्तानी प्राप्त गर्नुहुनेछ।
जंगली हावा- तपाईंले रीलहरूमा बर्फाइरहेको फ्ल्याक देख्नुहुनेछ जुन प्रति रीलमा प्रतीकलाई वाइल्डमा बदल्नेछ। त्यसोभए कुल। प्रतीकहरू जंगलीमा परिणत हुनेछन्।
फ्रि स्पिन- तपाईले 5, २० वा १०० पटक प्राप्त गर्नुहुनेछ तपाईको जम्मा हिस्सेदारी,, or वा scat स्क्याटर कुनै पनि दृश्यमा अवतरण गर्नका लागि। तपाईं पनि प्रक्रियामा,, १० वा १ free नि: शुल्क स्पिनहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ। सुविधाको बखत कुनै पनि अतिरिक्त जंगली अवतरण सुविधाको बाँकी अवधिको लागि यसको ठाउँमा टाँसिनेछ। यस सुविधालाई or० वा बढी स्क्याटरमा अवतरण गरेर पुन: सृष्टि गर्न सकिन्छ जुन free० नि: शुल्क स्पिनहरू दिन्छ।
उत्कृष्ट दृश्यहरू र नरम, सुखदायक ध्वनि ट्र्याक साथ बोनस सुविधाहरूको एक राम्रो चयन गर्दछ यो एक धेरै मनोरन्जनात्मक खेल। खेलाडीहरूले यस आकर्षक खेलको अनुभव गर्न सक्दछन् पाउन्ड क्यासिनो। खेलले खेलाडीहरुलाई करीव .5 .5..58१TP१ टी को भुक्तान दिन्छ।